Seenaa Doktaraa Kab. Artist Alii Birraa - GADAA MAGAZINE
• Jireenyaa Ijoollummaa Isaa
Yeroo ijoollummaa isaa karaa irratti daldala adda addaa hojjatee of gargaaraa ture. Wayita umuriin isaa 13 ta’u, hawwisoo Afran Qalloo kan aadaa Oromoo guddisuuf dhoksaadhan hojjachaa turetti makame. Afran Qalloo hawwisoo magaalaa Dirre Dhawaa keessati sirna gabrummmaa Hayila Sillaassee mormuufii aadaa Oromoo guddisuuf dhaabbate. Namoota hawwisoo kana keessa turan keessaa tokko weellisaa Alii Birraati.
Sirbi inni jalqaba waltajjiirratti sirbe “Birraa dha bari’e” kan jedhamu ture. Kanarraa ka’ee maqaa Alii Birraa jedhamu argate. Mootummaan Hayila Sillaassee hawwisoo kana bara 1965tti cufee miseensota hawwisoo kanaas gartokkee mana hidhaatti naqe. Aliinis baqatee gara Finfinneetti gale.
Jireenya Isaa Finfinneetti
Aliin erga Finfinneetti galee booda hojii sirbaa adda addaa hojjachuu jalqabe. Yeroo kana Aliin sabboonaa Oromoo Ahimad Taqii wajjin wal bare. Ahimad Taqiis Alidhaaf akka ittiin sirbuuf jedhee gitaara biteef. Beekkamtummaan Aliis magaalaa Finfinnee keessatti saffisaan dabale. Aliin Afaan Oromoon biratti Afaan Amaaraa, Afaan Arabaa, Afaan Hararii fi Afaan Sumaaleetiin sirbuu danda’a ture. Kunimmoo namoota adda addaa biratti akka jajamuu fi jaalatamu godhe. Namoota isa jaalatan keessaa tokko Iyyu’eel Yohaannis kan jedhamu dura bu’aa Kibur Zabanyaa kan ture tokko ture. Innis Aliin Kibur Zabanyaatti akka makamu godhe; achittis weellistoota beekkamoo kan akka Mahaammud Ahimad, Xilaahun Gassasaa, fi Buzunash Baqqalaafaatti makame.
Doktaraa Kab. Artist Alii Birraa
Seenaa Artist Alii Birraa
"Madaalliin Namummaa Gaarummaadha" Dargaggoo Ifaa Taliilaa
Arstist Hacaaluu irraa dhaloonni maal barataa?